Video: Who is Somalia's intelligence chief Fahad Yasin? | KEYDMEDIA ENGLISH
Fahad wuxuu dhashay 1977 ama 1978. Taariikhdiisa dadka inta badan kalama yaqaanaan. Baasabooradiisa Soomaaliga iyo Kenya waxaa ku qoran macluumaad kala duwan oo noloshiisa ku saabsan.
Markii hooyadiisa iyo aabihiisa kala tageen 1980-tameeyadii, waxaa la keenay isagoo yar Muqdisho oo uu ka dhigtay dugsiyo Qur’aan oo caruurta qoysaska saboolka ah si lacag la’aan ah wax ku bara. Waxay deganaayeen Xaafadda Howlwadaag.
Markii xukunka laga tuurey kaligii-taliskii Maxamed Siyaad Barre 1991, Fahad iyo qoyskiisa waxay u carareen Kenya, iyagoo qaxooti ku noqday xerada Utanga, oo ku dhaw magaaladda Mombasa.
Intii uu ku noolaa xerada qaxootiga, Fahad waxaa xag-jireeyay C/shakuur Cali Mire iyo Jamaal Maxamed Xasan, oo ku biiriyay Ururka Al-Itixaad al-Islamiya, oo ku jira liiska argagaxisadda Mareykanka iyo QM.
Saandkii 1997, Ciidamada Itoobiya ayaa dilay C/qaadir Gardheere oo ahaa adeerkiisa qaba hooyadiisa isagoo u dagaalamaya Ururka Al-Itixaad al-Islamiya, oo Xasan Daahir Aweys hogaamiye u ahaa xiligaas, taasi waa markii uu Fahad go'aansaday in uu 'aargoosto'.
Fahad ayaa carro ka qaadey dilka adeerkiisa, waxaana ku beermay nacaybka reer galbeedka iyo Itoobiya, isagoo wixii markaas ka dambeeyay sii noqonayay xag-jir, aad u taageera kooxaha argagaxisadda Soomaaliya, sida Maxkamadihii Islaamiga ee la burburiyay 2007 iyo Al-Shabaab.
Kadib weeraradii qaraxyada ee lagu qaadey Safaaradaha Mareykanka ee Tanzania iyo Kenya 1998, Fahad ayaa dib ugu laabtey Soomaaliya, wuxuuna billaabey inuu maqaallo u qoro Website lagu magacaabi jiray Somalitalk.com, inkastoo maqaaladdaas qaarkood la tirtiray hada, laakiin wali qaarkood waa saaranyihiin websiteka.
Qoraaladdaas oo uu qori jiray sanadkii 2005 ayuu ciwaanno 'Clickbaiting' siin jira sida "SIYAASIGA SOOMAALIGA AH EE AAN RABNO YAA INOO HAYA??!!" ama "URURADA ISLAAMIGA AH IYO CIIDAMADA SHISHEEYE.".
Sanado kadib, Fahad ayaa laga waayay Soomaaliya. Qaar kamid ah saaxiibadiisa waxay sheegeen inuu u dhuuntay Yemen, oo Diinta Islaamka ku baranayay. Saaxiibo kale ayaa sheegay inuu aaday Pakistan.
Fakerkiisa xag-jir waa uu soo xoogeystay mudadii uu dibadda ku maqnaa. Markii uu dib ugu soo laabtay Soomaaliya, Faarax C/qaadir, ninka awoodda badan ku lahaa dowladdii Xasan Sheekh ayaa Fahad baray agaasiimiha Al-Jazeera TV, qeybta Carabiga Wadah Khanfar oo Faarax ay isku fasal [Class] ahaayeen.
Fahad ayaa noqday macalinka Caruurta Wadah Khanfar, oo uu dalka Qatar ku biri jiray Qur’aanka. Sanado kadib, Fahad waxaa loo soo diray Muqdisho, si uu wariye madaxa-banaan oo wararka usoo dira Al-Jazeera u noqdo.
Maadaama uu ahaa nin xagga diinta dalala dhowr ah kusoo bartay oo xag-jir ah, waxuu la fal-galay Kooxaha argagaxisadda Soomaaliya, oo hogaamiyeyaashooda sare wareysiyo ka qaadey, isagoo ah wariye katirsan Al-Jazeera Arabic.
Maadaama uu ahaa Suxufi, Fahad ayaa galaan-gal u sheegay siyaasadda Soomaaliya markii dalka laga saarey Maxkamadihii Islaamiga 2007, waxuuna dalaal u noqday dowladda Qatar wixii ka dambeeyay 2012.
Lacago badan Malaayiin dollar ah ayuu dowladda Qatar kasoo qaadey, taasoo uu siiyay musharaxiin tartan ku jiray, laakiin kuma guuleysan doorashadii 2012, maadaama Xasan Sheekh kusoo baxay, oo Faarax C/qaadir saaxiibo iyo xulufo ahaayeen.
2017 ayuu nasiibkiisa ku tijaabiyay Farmaajo, waana ku guuleystay doorashadda, taasoo ka dhigtay hadda ninka ugu awoodda badan Soomaaliya, isagoo NISA taliye ka noqday, xogta qarankana siiya Doha.
NISA ayuu sidaan ognahay kusoo daray Saraakiil badan oo ka tirsanaa Kooxda Al-Shabaab, taasi oo keentay in maanta Hay'adda Sirdoonka iyo Argagixisadda Al-Shabaab ay isku milmeen.
“Shaki kuma jiro in laba Shabaab wada Shaqeeyaan” Kooxda Kalamaan.
KEYDMEDIA ONLINE / TNI
Comments Topics: alshabaab fahad yaasiin
Al-Shabaab terrorists suffer significant fatalities near Mogadishu
News 26 February 2022 4:24
After attempting to attack a military facility in Mogadishu, 29 al-Shabaab militants were killed, according to a high-ranking SNA commander.